अमेरिकामा ट्रम्पलाई धक्का, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अमेरिकामा ट्रम्पलाई धक्का
एजेन्सी। अमेरिकाको मध्यावधिक चुनावमा तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेनटेटिभमा डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको छ । माथिल्लो सदन सिनेटमा भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पार्टी रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत कायम गर्न पुनः सफल भएको छ । तल्लो सदनमा पनि रिपब्लिकन नै अघि रहेकोमा त्यसलाई उल्ट्याउँदै डेमोक्र्या्टिक पार्टीले बहुमत ल्याएको हो ।
सिनेटमा बहुमतका लागि आवश्यक ५१ सिट जितिसकेको छ । तल्लो सदनमा भने डेमोक्र्या्टिक पार्टी ८ वर्षपछि पुनः आफ्नो पकड कायम गर्न सफल भएको हो । डेमोक्रेटिक पार्टीकी नेतृ न्यान्सी पेलोसी तल्लो सदनको सभामुख बन्ने पक्का भएको छ ।अमेरिकाको तल्लो सदनको इतिहासमा पहिलो महिला सभामुख बनेकी उनी फेरि उनी सभामुख बन्दै छिन् ।
सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपति चुनावपछिको भएको पहिलो चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीले राम्रो प्रदर्शन गरेको हो । यो चुनावमा महिला प्रतिनिधिहरु बढी विजयी भएका छन् ।